August 2018 – စာအုပ်မြို့တော်
“လိုက်နာမှတ်သား ရှေးရှေးတုန်းက အဆိုအမိန့်များ”
(၁) မဟောင်တတ်သော ခွေးသည် ကိုက်တတ်၏။ စကားမပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေသူသည် မိုက်တတ်၏။ (၂) အကောင်းပြောလျင် ချက်ချင်း ၀မ်းမသာပါနှင့်၊ မကောင်းပြောလျင်လည်း ချက်ချင်း ၀မ်းမနည်းပါနှင့်။ (၃) ကန်ဖူးသော မြင်းသည် ကန်ချက်ကို မမေ့။ လူသည်လည်း အကျင့်ပျက်ကို မမေ့။ (၄) ထိုင်သည့်အခါ အောက်ကို ကြည့်ပါ။ ထသည့်အခါ အပေါ်ကို ကြည့်ပါ။ (၅) မပုပ်သော အသီးကို ပိုးမထိုး။ မရှိသောသူကို သူခိုးမခိုး။ (၆) လက်ခြေတို့သည် ၀မ်းဗိုက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်သည်။ မည်သူကမျှ အလကားခေါ်မကျွေးနိုင်။ (၇) ခမောက်သည် လူ၏ ဦးခေါင်းနှင့် မကင်း၊ လူတိုင်းသည် အချစ်နှင့် မကင်း။ (၈) နှုတ်ခမ်းရွဲ့သူသည် ဆဲရေးတတ်၏၊ မာနကြီးသူသည် စကားကျဲ၏။ (၉) […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 29/08/2018
တစ်ခါက မြို့တစ်မြို့တွင် အင်မတန် ဆိုးသွမ်းသော ဒုစရိုက် လူဆိုးတစ်ယောက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိလိုက်လေ၏။ အမှုတွဲမှတ်တမ်းတင် ရဲအရာရှိက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ခုလို လူဆိုးဖြစ်နေရသနည်း ဟု မေးမြန်းကြည့်လေ၏။ မေး- “ ခင်ဗျား ဘာကြောင့် ဒီလို လူဆိုး ဘ၀ရောက် နေရတာ လဲဆိုတာ လူငယ်တွေ သိပြီး ရှောင်နိုင်အောင်လို့ ပြောပေးပါလားဗျာ” ဖြေ – “ ကျွန်တော် လူဆိုး ဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိက တရားခံက ကျွန်တော့်အမေရဲ့ နောက်ယောက်ျား (ပထွေး) ကြောင့် ပေါ့ဗျာ။ ပထွေးက သူလုပ်ကျွေးရတာဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ကို နှိပ်စက်တယ် ၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ညစ်တဲ့ အတွက် အမေနဲ့ ပထွေးကို အရွဲ့တိုက်ပြီး အရက် သောက်တယ် ၊ […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 23/08/2018
ဂန္ဒီရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဆိုရိုးစကား (အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ)
၁။ မနက်ဖန်သေရမယ်လို့ မှတ်ယူပြီး အသက်ရှင်ပါ။ တစ်သက်လုံး အသက်ရှင်ရမယ်လို့ မှတ်ယူပြီး လေ့လာသင်ကြားပါ။ ၂။ ရန်ကိုရန်ချင်း တုံ့ပြန်နေရင် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်ဆီးသွားပါလိမ့်မယ်။ ၃။ လူဆိုတာ သူတွေးသလို ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဘယ်လောက်ထိ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ တိရစ္ဆာန် တွေကို ဘယ်လိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ် နိုင်ပါ တယ်။ ၅။ ပထမဆုံး သင့်ကို လစ်လျူရှုမယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို ရယ်မော လောင်ပြောင်မယ်။ ပြီးတော့ သင့်ကို တိုက်ခိုက်မယ်။ ဒီနေရာမှာ အနိုင်ရနေရသူဟာ သင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 1. Live as if you were to die tomorrow. Learn […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 22/08/2018
သင့်ဘဝမှာ ကြေကွဲလို့ရတယ်…. ဝမ်းနည်းလို့ရတယ်…. နာကျင်လို့ ရတယ်…. ထိခိုက်လို့ရတယ်…. ဒိအတွက် … နာကျင်ခွင့် ရင်နာခွင့်အပြင် ပြိုလဲခွင့်ရှိတယ်…. အဲဒိအတွက်ဆိုရင် သေလောက်အောင် အော်ငိုလို့ရသေးတယ်…. ဒါပေမဲ့….တစ်ခုသတိပေးမယ်။ အဲဒါကြောင့်တော့ သင်ကျဆုံးခွင့် မရှိဘူး! ဘာလို့လဲဆိုရင်…. သင့်နောက်မှာ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်… ကိုယ့်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေရှိတယ်… ကိုယ့်ကိုမနာလိုသူတွေရှိတယ်… ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေသူတွေရှိတယ်… ကိုယ့်မကောင်းကြောင်းပြောမဲ့သူတွေရှိတယ်… ကိုယ့်ဟာကွက်အလစ်ချောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်… ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကျဆုံးတာကျေနပ်မဲ့သူတွေရှိတယ်…. ဒါကြောင့် သင် ငိုပါ ဝမ်းနည်းပါ ကြေကွဲပါ ရင်ကွဲပါ နာကျင်ပါ…. ပြီးသွားရင် မရ ရအောင်ပြန်ထပါ… :နေ့စဉ်ဖတ်မိသောစာ – Credit# < Unicode Version > သငျ့ဘဝမှာ ကွကှေဲလို့ရတယျ…. ဝမျးနညျးလို့ရတယျ…. နာကငျြလို့ ရတယျ…. ထိခိုကျလို့ရတယျ…. ဒိအတှကျ […]
Posted in: ဆောင်းပါးLeaveacommentMM Book City	 21/08/2018
“အဆိုတော် ထူးအိမ်သင် အကြောင်း”
ထူးအိမ်သင်မဖြစ်မီ အမည်ရင်း ကျော်မြင့်လွင်ဘဝနဲ့ ရန်ကုန်ကို သီချင်းသွင်းဖို့ တက်လာတော့ ဘားလမ်းထိပ် ၊ အနော်ရထာလမ်းပေါ်က အပ်ချုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တီးဝိုင်းကိစ္စ ဝင်မေးတယ် ။ အဲသည် အပ်ချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က Aces တီးဝိုင်းမန်နေဂျာ ကိုစိုးအောင် အကိုပါ ။ ကျော်မြင့်လွင်ကိုကြည့်ပြီး ဘယ်ကလဲလို့ မေးတယ် ၊ ပုသိမ်ကပါလို့ ဖြေတယ် ။ ပုသိမ်ဖက်ကဆိုရင် မင်းအောင်လို သီချ င်းမျိုးတွေပဲ ဖြစ်မှာပဲ ၊ Aces က ဒါမျိုးမတီးဖူးလို့ ပြောလွှတ်တာ ခံခဲ့ရပါတယ် ။ စီးရီးသွင်းပြီးပြန်တော့ ဘားလမ်းထဲကပဲ ဂန္ဓမာတေးသံသွင်းကို သွားပြတယ် ။ စီးရီးရောင်းချင်လို့ပါပေါ့။ အဲသည်မှာ ဆိုင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က သီချင်းတွေ နားထောင်မကြည့်ပဲ ဇာတိမြို့ ကို မေးပြန်တယ် ။ […]
Posted in: BooksLeaveacommentMM Book City	 21/08/2018